Tenerife - Atlas တွင်ရောင်းရန်အိမ်ခြံမြေ
Virtual Visit & 360ºဓါတ်ပုံ
လမ်း၊ မြို့၊ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဇစ်
ျပည္နယ္အားလုုံးADEJEARAFOARICOအာနိုးBUENAVISTA DEL NORTEကော်ပိုရေးရှင်းEL SAUZALEL TANQUE ဖြစ်သည်FASNIAGARACHICOGRANADILLA DE ABONAGUIA DE ISORAGUIMARICOD DE LOS VINOSLA LAGUNALA က OROTAVALos REALEJOSLos SilosPuerto DE LA CRUZSAN JOSE DE LOS LLANOSSan Juan DE LA RAMBLAစန်း Juan DE REPAROSanta Cruz DE TENERIFEစန်တာ URSULASANTIAGO DEL TEIDEမင်္ဂလာပါ
ခံစားချက်တွေကို မြို့အားလုံးAdejeAgua Dulceအယ်လ်ကာလာအာရာဖိုအာဂွာယိုAricoAronaBajamarBuenavista Del NorteBuenavista ဂေါက်သီးCandelariaayရာဝတီကChioကော့စတာ Del SilencioCueva De PolvoCueva Del Vientoအယ်လ်ဂျာရာလာအယ်လ်မက်ဒီနိုအယ်လ်Porísအယ်လ် Prisအယ်လ် Sauzalအယ်လ် Tanqueဖေြာမရှင်Garachicoမျိုးရိုးဗီဇဂေါက် Del SurGranadilla De AbonaGuia De IsoraဂီမာIcod De Los Vinosguရာဝတီဂျိုဗာla Calderala Caleta De InteriánLa LagunaLa Montañetala Orotavala Reinala VegasLas Aguasအမေရိကတိုက်Las CaletillasLas CaletitasLas Erasကွတ်ကီးများLas Lagunetasလာ့စ်ဗီး ManchasLas Portelasလာ့စ်ဗီး RosaLos Abrigosခရစ်ယာန်များအဆိုပါ GiantsLos RealejosLos SilosMascaMar MarPalmarParque De La ReinaPlaya De La ArenaPlaya De San JuanPlaya ParaísoPlaya စန်းမားကို့စပလာယာ SiboraPuertito De GuimarPuertito De Los SilosPuerto De La CruzPuerto De SantiagoPunta De HidalgoRadazulစန်းအန်ဒရေ့စ်စန်း IsidroSan Jose De Los LlanosSan Juan De La RamblaSanta Cruz De TenerifeSaint Ursulaစန်တီယာဂို Del Teideဆိုတာဗီတိုကျောက်တံတားပုဂံTajaoTamaimoTauchoTejina De IsoraTierra Del TrigoValle De Guerra
စျေးအကွာအဝေး: € 10,000 သို့ € 5,000,000
အရွယ်အစားအကွာအဝေး: 100 သို့ 10000
Lot အရွယ်အစား: 1 သို့ 100
မည်သည့် 1+ 2+ 3+ 4+ 5+
အိမ်ခြံမြေရောင်းအား & ငှားရမ်း
သမုဒ္ဒရာအနီးရှိ Tenerife ရှိ အိမ်ခြံမြေများ
Tenerife ရှိ အိမ်များနှင့် တိုက်ခန်းများကို သမုဒ္ဒရာ အနီး သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့် အနီးတွင် တိုက်ရိုက် ရှိသည်။
ကျေးလက်အိမ်၊ Finca၊ အိမ်
Buenavista ရှိ မြေကွက်နှင့် မြင်ကွင်းများပါရှိသော သီးခြားအိမ်။
P Patio နှင့်အံ့ Views ဖွယ်ရာရှုခင်းများပါသည့် Oceanfront အိမ်ကြီး။
🏖️ရေကူးကန်နှင့်အတူ Oceanfront တိုက်ခန်း!
front Oceanfront Penthouse + ရေကူးကန် !!
Los Cristianos ၏နံရံတွင်ရှိသောကမ်းခြေတိုက်ခန်း။
Puertito De Los Silos ရှိစတိုင် Oceanfront Penthouse!
တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို/ လုံးချင်းအိမ်/ အတန်းအိမ်၊ နှစ်ထပ်
Big House + Lockup Garage ။ မြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းများ ကမ်းခြေမီတာ ၃၀၀
၂ ထပ်ပါကျယ် ၀ န်းသော Oceanfront တိုက်ခန်း!
ပင်လယ်ကမ်း Sibora, Los Silos Tenerife
Golf Del Sur ရှိ Golf Pool ရှိတိုက်ခန်းမြင်ကွင်း
Golf Del Sur ၏ Marina ၏ Marina ရှေ့ရှိ Seaside တိုက်ခန်း
Los Gigantes ရှိ Panoramic မြင်ကွင်းများပါသောတိုက်ခန်း
Los Gigantes ရှိ Penthouse တိုက်ခန်း + ကားပါကင် + စတိုးအခန်း
Los Gigantes ရှိ Penthouse မြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းများ ကားပါကင်!
Santa Cruz အနီးရှိအံ့သြဖွယ် Surf သဲသောင်ပြင်အိမ် !!
Tenerife ရှိ ကျေးလက်အိမ်များ
Tenerife တွင် အလွန်လှပသော ကျေးလက်ဒေသတစ်ခုရှိသည်။ မြို့ငယ်လေးများနှင့် ရွာများတွင် သဘာဝအတိုင်း ဝန်းရံထားသော ကျွန်ုပ်တို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအစုစုကို စူးစမ်းပါ။
Garachico ၏မြူနီစီပယ်တွင်အံ့သြဖွယ် Finca ။
စန်တီယာဂို del Teide
Los Gigantes အနီးရှိ နိုင်ငံ့အိမ်နှစ်လုံး။
Tamaimo, စန်တီယာဂို del Teide Tenerife
မြေကွက်ကျယ်ပြီး အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ရှုခင်းများပါရှိသော သီးသန့်အိမ်။
ခမ်းနား Finca + အိမ် + အသီး + ရေ!
ATLAS Tenerife မှကြိုဆိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ ATLAS Tenerife SL သည်စပိန်နိုင်ငံ၊ Tenerife ကျွန်းပေါ်တွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ စတင်၍ မှတ်ပုံတင်ထားသောအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းအေဂျင်စီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများဖြင့်အကောင်းဆုံးနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးဂုဏ်သတ္တိများကိုပေးအပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကစပိန်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ဂျာမန်နဲ့ရုရှားလိုပြောတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်သူရောရောင်း ၀ ယ်သူများကိုပါအရည်အသွေးနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာသောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်ပြည်တွင်းအိမ်ခြံမြေဥပဒေတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏လုံခြုံမှုနှင့်ကျေနပ်မှုကိုအာမခံသည်။ ငါတို့❤အိမ်ခြံမြေများ! ငါတို့❤ Tenerife!
ရေချိုး + ရေချိုးခန်းအားလုံး 1+ 2+ 3+ 4+ 5+
© 2022 Tenerife တွင်ရောင်းရန်အိမ်ခြံမြေများ – Atlas, All Rights Reserved. နောက်ကျောထိပ်